မိုင်းယာဒဏ္ဍာရီ (အင်္ဂလိပ်: Maya mythology) သည် မီဆိုအမေရိက (သို့) အလယ်ပိုင်းအမေရိက ဒဏ္ဍာရီ၏ အပိုင်းဖြစ်ကာ မိုင်းယာလူမျိုးများ၏ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များပါဝင်၏ ။ ထိုပုံပြင်များ၌ သဘာဝတရား၏ အားများကို လူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားထားသော နတ်ဘုရားများပါဝင်၍ ထိုနတ်ဘုရားများနှင့် သူရဲကောင်းများကြား အချင်းချင်းတုံပြန် ဆောင်ရွက်မှုများသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့်ပါဝင်သည်။ ဟစ်(စ်)ပဲန်နစ်ခေတ် မတိုင်မီ (အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းအား စပိန်တို့မကျူးကျော်ခင်ခေတ်) က ဒဏ္ဍာရီများကို အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများတွင်ပါရှိသော ရုပ်ပုံ၊ သင်္ကေတများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ထုတ်ဖော်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ မိုင်းယာတို့၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်ပုံပြင်၊ ရိုးရာပုံပြင်နှင့် များစွာသော စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို ဤ၌ ဒဏ္ဍာရီအဖြစ် စဉ်းစားမှုမရှိချေ။
ယူကာတန်သည် (Yucatán) နောက်ထပ်အရေးကြီးသော ဒေသဖြစ်၍ ချီလန် ဘာလမ်၏ ယူးကာတက်ဘာသာစကား(Yucatec) ဖြင့် စာအုပ်များတွင် အလွန်တရာရှေးကျသော ဒဏ္ဍာရီလာစာပိုဒ်များ ပါရှိကာ ဒဏ္ဍာရီအပိုင်းအစများကို အစောပိုင်း စပိန်ကိုလိုနီတို့၏ စဉ်ဆက်ပြမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အစောပိုင်း သာသနာပြုများ ပြုစုခဲ့သော အဘိဓာန်များ စသည်တို့၌ ပြန့်ကျဲလျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအထဲ၌ အဓိကအကျဆုံးမှာ ဒီယေးဂို ဒီ လန်းဒါး၏ "ရီလသီယွန် ဒီ လ(စ်) ကိုးရှပ်စ် ဒီ ယူကာတန်" (Relación de las cosas de Yucatán) စာအုပ်ဖြစ်သည်။
၁၉-၂၀ရာစုများတွင် မနုဿဗေဒပညာရှင်များနှင့် ဒေသတွင်း ရိုးရာစဉ်ဆက်ပုံပြင်လေ့လာသူများက မြောက်များစွာသော ပုံပြင်များကို အများအားဖြင့် စပိန် (သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးမှတ်ခဲ့ကြ၍ ရှားရှားပါးပါး မိုင်းယာဘာသာစကားနှင့် အတူယှဉ်တွဲတွေ့ရသည့် စာများဖြစ်သည်။ မိုင်းယာပုံပြင်အများစုသည် သမိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါသမိုင်းဖြစ်စဉ်ဆိုရာ၌ စပိန်တို့၏ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်ရိုးရာဓလေ့များသည် မူရင်းရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြု ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ သို့သော် ထိုမူရင်းဇာတ်လမ်းပုံပြင်အချို့သည် သက်တမ်းအားဖြင့် စပိန်(တို့ကျူးကျော်သော)ခေတ်ကာလမတိုင်မီမှ ဖြစ်ကြသည်။ အရေးကြီးသော ဒဏ္ဍာရီများကို ခိုးလ် (Ch'ol) လူမျိုးများ၊ ကွက်ချီ (သို့) ကက်ချီလူမျိုးများ (Kekchi)၊ လန်ကာဒန်လူမျိုးများ (Lacandon)၊ တစို့တ်စစ်လ်[မှတ်စု ၃] (သို့) စို့တ်စစ်လ် လူမျိုးများ (Tzotzil)၊ တစူးတာဟီးလ်လူမျိုးများ (Tzutujil)[မှတ်စု ၄] နှင့် ယူးကာတက်နွယ် မိုင်းယာများ အတွက် နားလည်ရလွယ်ကူသော အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကိုသာလျှင် ဖော်ပြရန် ရေးသားထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုအစပိုင်း၌ ရိုးရာဇာတ်လမ်းပုံပြင်များအား နှုတ်မှုရေးရာလက်ဆင့်ကမ်းခြင်း တစ်ခန်းရပ်ခဲ့လေသည်။
ကိုလိုနီခေတ်အစောပိုင်းနှင့် မကြာသေးမီက အရေးကြီးသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်အကြောင်းအရာများပြင်ဆင်
ပိုပိုဗူး စာသားများက လောကဖန်တီးရှင် နတ်ဘုရားအုပ်စု တစ်စုသည် ကမ္ဘာမြေကို ဖန်တီးပုံနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားသည်။ ချူးမေယဲဒေသမှ ချီလမ် ဘာလမ်၏ စာအုပ်က မိုးကောင်းကင်ပြိုလဲမှုနှင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြီးအကြောင်း၊ ထို့နောက် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရဇိ မိကျောင်းကြီးအား သုတ်သင်ခြင်း၊ ကောင်းကင်ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း တည့်မတ်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့သစ်ပင်ကြီးငါးပင် ကိုစိုက်ပျိုးကြီးထွား ထောင်မတ်ခြင်းတို့အကြောင်း ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ လန်ကာဒန်လူမျိုးတို့သည် မြေအောက်ကမ္ဘာဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကိုလည်း သိရှိခဲ့ကြ၏ ။
သူရဲကောင်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ: ကမ္ဘာမြေကို စီစဉ်ခြင်းပြင်ဆင်
ဤဒဏ္ဍာရီလာအမျိုးအစားသည် လူသားများနှင့် အမဲပစ်ခံ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများကြား ဆက်နွယ်မှုကို ဖော်ပြဖွင့်ဆိုသည်။ ကက်ချီရိုးရာပုံပြင်တွင် ရှေးဦးသူရဲကောင်းဖြစ်သော ရှဘလန်ကေးသည် ကမ္ဘာမြေနတ်ဘုရားတစ်ပါး၏ သမီးတော်ကို ပိုးပန်းရန် ဝတ်ရည်စုပ်ငှက်အသွသ်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုစဉ် မိန်းကလေးမှာ ယက်ကန်းခတ်နေ၏ ။ သူရဲကောင်း၏ ထိုဇနီးသည်ကို ဘဲငန်းငှက်အသွင်၊ ပျား၊ မြွေ၊ အင်းဆက် (သို့) ပြောင်း(ဖူး) အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သူရဲကောင်းဖြစ်သူက အသာစီးရလျှင် နေမင်းဖြစ်သွား၍ ၎င်း၏ဇနီးသည်သည် လဖြစ်သွားသည်။ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာချဲ့ကားထားသော တစို့တ်စစ်လ်မူ၌ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ယခင်ဇနီးသည်နှင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲစေရန် မိုးနတ်ဘုရား၏ သမီးတော်တစ်ပါးဆုချသည်ဟု ဆိုသည်။
နေနှင့် လတို့၏ ဇာစ်မြစ်ပြင်ဆင်
နေနှင့်လတို့သည် ကမ္ဘာမြေနှင့် လက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်ကား အမြဲတစေမဟုတ်ချေ။ မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းပြည်နယ် ချစ်ယားပါ့စ် နှင့် အနောက်ဖက် ဂွာတာမားလာ(ဂွာတီမာလာ) ကုန်းပြင်မြင့်တို့မှ ညီငယ်လေးနှင့် မနာလိုတတ်သော အကိုကြီးများ (Younger Brother and his jealous Elder Brethren) ဇာတ်လမ်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်။ အသယ်ဆုံးညီငယ်မှာနေမင်းဖြစ်သွား၍ မိခင်သည် လဖြစ်သွားသည်။ အကိုကြီးများမှာ တောဝက်နှင့် အခြားတောနေ တိရစ္ဆာန်များအဖြစ် အသွင်ပြောင်းကြသည်။ ပိုဗူးအမွှာဒဏ္ဍာရီပါ အကိုကြီးများသည် မျောက်အသွင်ဖြစ်သွား၍ ညီငယ်များမှာ နေနှင့်လဖြစ်သွားကြသည်။ မိုင်းယာဒေသ၏ အနောက်ဘက်တွင် ထိုနေနှင့်လဖြစ်သွားသော ညီအကိုများအကြောင်းသည် များစွာသောပုံပြင်များ၏ အဓိကအကောင်းအရာပိုင်းဖြစ်သည်။
Thompson, J. Eric S. (1970). Maya History and Religion, Civilization of the American Indian Series, No. 99. Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 0-8061-0884-3. OCLC 177832။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုင်းယာဒဏ္ဍာရီ&oldid=517545" မှ ရယူရန်
၂၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။